Abụọ Stations ejikọtara na Subzmir Narlıdere Subway | RayHaber
[10 / 12 / 2019] Metro Istanbul ga-eme ka ịzụta ụgbọ oloko zuo	34 Istanbul
[10 / 12 / 2019] Ndị na-anya ụgbọ mmiri zuru ụwa ọnụ na-abịa Eskisehir	26 Eskisehir
[10 / 12 / 2019] Ntị 3 na Ọnọdụ Ọdachi Çorlu	59 Corlu
[10 / 12 / 2019] A napụtara ndị ọrụ Samsun Army High Speed ​​Train Line Army	52 Army
[10 / 12 / 2019] Ekekọrịtara foto mbu nke ụgbọ oloko dị elu	06 Ankara
HomeTurkeyMpaghara Aegean35 IzmirAbụọ Metro Stations n'Otu na Narlidere
07 / 11 / 2019 35 Izmir, ụgbọ okporo ígwè, Mpaghara Aegean, Foto, General, Maps, KENSİÇİ Rail Systems, Isi akụkọ, Metro, Turkey
abụọ ụgbọ oloko ụgbọ merged na Narlidere
Abụọ Stations ejikọtara na Subzmir Narlıdere Subway; Ejikọtara ọdụ ụgbọ abụọ mbụ na ibe ha na eriri kilogram 7,2 n'etiti Fahrettin Altay na Narlıdere, nke İzmir Metropolitan Obodo na-ewu.
İzmir Obodo ukwu na-aga n’ihu n’iwu nke Narlıdere Metro, nke hibere na June. Fahrettin Altay-Narlıdere Izmir Metropolitan Obodo na-arụ ọrụ na ọdụ asaa n'otu oge, n'etiti ọdụ Balçova na ebe ngbasa ozi Consorom 2018 mita site na igwe na-egwu mmiri (TBM) jikọtara ọdụ abụọ ahụ.
Ọrụ ikpeazụ nke TBM, nke a na-akpọ kö Giant Mole birleştir n'ọwara sonyeere ọdụ abụọ, ndị ọrụ nke İzmir Metropolitan Obodo na ụzọ ụgbọ oloko ji obi ụtọ nabata ya. N'ime ndị na-ele ọpụpụ nke ọwara TBM, Secretary General General icipzmir nke Obodo ukwu. Buğra Gökçe, osote onye odeakwụkwọ ukwu Eser Atak na Mehmet Ergenekon, Onye isi ala na Systemlọ Mgbasa Akụ na Ragbọ okporo ígwè na-anọkwa.
Mgbe arụchara ọrụ ndị ahụ, onye njem si Bornova EVKA-3 na ụzọ ụgbọ oloko ga-enwe ike ịga na Narlıdere ozugbo. Ogologo uzo nke uzo uzo ugbo ala na İzmir ga-erute 179 kilomita site na 186,5.
Nnukwu ahumakor jikọtara ọdụ abụọ
Na Fahrettin Altay-Narlıdere metro project ebe ihe dị ka ndị mmadụ 900 na-arụ ọrụ, ihe karịrị narị kilomita 4 ka emepere emepe ruo taa. Obodo İzmir nke mepere emepe mepere ọwara mita 3 150 site na iji usoro klaasị “Austzọ Ọstria Austrian NAT (NATM). Site na NATM, 1,5 mepere oghere 3 puku 150 mita kwa afọ, ebe CPN na 1,5 na-enwe ọganihu 860 mita kwa ọnwa. Nke abụọ TBM, nke wuru n’elu ahịrị, bidoro igwu mmiri wee gaa mita 105. Ya mere, ngụkọta ogologo nke okporo mmiri ahụ mepere mita 4 puku 115 ruru. Obodo İzmir nke obodo mepere emepe ka enwee nnukwu ego n’ime obodo n’etinyeghi ego site n’aka steeti.
Transportationgbọ njem na-akwụsịghị akwụsị na Bornova rue Narlıdere
Metro na-arụ ọrụ ngwa ngwa, na-akụghasịghị Secretary General nke ọganihu ahụ. Bugra Gokce, rakam Ọnụọgụ a na-egosi na anyị na-agba ọsọ ọsọ. Yabụ na nke a pụtara na oge ịsa anyị dị mkpụmkpụ. CPC ga - eduru anyị ruo na ọsọ ọsọ. Na njedebe nke 2020 anyị na-eme atụmatụ ịrụcha usoro olulu mmiri anyị. Mgbe ahụ anyị na-arụ ọrụ anyị ndị ọzọ na 2022, ọ bụrụ na enwere ọghọm, anyị na-ebunye ndị Izmir ọrụ ụgbọ ala anyị. N'ụzọ nke a, ị nwere ike ịga site na Bornova gaa Narlıdere site na metro. ”
Izmir na-akwado maka ọdịnihu
N'ịkọwa mkpa ọ dị itinye ego na njem njem ọha, Gök saide kwuru, birinci Ihe mbido njem nke ọha bụ usoro ụgbọ okporo ígwè, enweghị nhọrọ ọzọ. Obodo ndi n’eme uzo ugbo ala na akwado ihe odi n’ihu, obodo anyi n’iru na akwado izo Izmir maka odi n’iru. Ebumnuche ọhụụ nke Onye isi ala anyị Tunç Soyer bụ Buca Metro anyị na-akwado ya. Na 2020, anyị na-achọ ịtọ ntọala nke Buca Metro, nkwado anyị dị nro na-aga n'ihu na ntuziaka a. N’aka nke ọzọ, nkwadebe maka Çiğli Tramway na-aga n’ihu na-agba oke. Ọzọ na 2020, anyị bu n’obi bido ọrụ maka Çiğli Tram ”.
Izmir Railway Systems Map
Ijeri ego si na İzmir BB! ... Narlıdere…
Kocaoğlu, Narlıdere Subway nke İzmir Metropolitan…
İzmir Subway F. Altay-Narlıdere District Governorship…
İzmir Metro F. Altay Narlıdere Mgbatị (Live Mgbasa ozi)
A ga-etinye Subzmir Narlıdere Subway ọrụ na njedebe nke 2022
Mmiri miri emi na Narlıdere ụzọ ụgbọ oloko
Narlıdere Bridge Junction na-arụ ọrụ na Ọsọ zuru oke…
Akwụsị na-amalite na Narlıdere Station
Ọgwụgwụ na Narlıdere Köprülü Junction
"Ibu Ụzọ Mbụ" Na-apụta na Ala Narlıdere
Nhazi okporo ụzọ n'okpuru Narlıdere Metro
Ntughari ikike nke ụzọ Sublıdere
Nsogbu Okporo Ragbọ okporo ígwè na Narlıdere
Nnukwu Mmiri Na-aba n'Ala Ala Ala Narlıdere
Prime Minista, Fahrettin Altay-Narlıdere Metro Project…
Usoro ụgbọ oloko railzmir
Fahrettin Altay Narlıdere Subway
RayHaber Ozi Ntanye 07.11.2019
Mahadum nke Ege ga-akpọghachi ndị ọrụ ikpe amamịghe
Ndị na-anya ụgbọ mmiri zuru ụwa ọnụ na-abịa Eskisehir
Ntị 3 na Ọnọdụ Ọdachi Çorlu
A napụtara ndị ọrụ Samsun Army High Speed ​​Train Line Army
Ekekọrịtara foto mbu nke ụgbọ oloko dị elu
Onye na-ahụ maka ụgbọ njem-Sen Yerköy gara na ndị ọrụ TCDD
Inzọ Nationalgbọ ala ga-adị n'okporo ụzọ na-esote afọ
Bosphorus Express Amalitere mbufe njem site na Osmaneli
Bozankaya 30 na mbupụ Nde Euro na Romania
Ahịrị na Ahịrị Ọdụ na-amalite na China
Nkọwa niile gbasara Sapanca Cable Car Project
Türk-İş Onye Isi Ọchịchị Atalay na TÜVASAŞ
Ogo Mmepụta Ulo nke Anadolu Isuzu debara aha
Yandex Senior oge akara aka na Turkey
Usoro iheomume Bosphorus Express na Ahịa tiketi